Kooxda Banaadir Telecom oo qarka u saaran in ay ku guuleysato Horyaalka 35-aad Kubadda Cagta Soomaaliya.
Iyadoo hal kulan oo kaliya ka harsan yahay Horyaalka 35 aad ee kubadda Cagta Soomaaliya ayaa Kooxda Kubadda Cagta Banaadir waxay ku taameysaa inay ku guuleysato Horyaalka iyadoo u baahan oo kaliya hal dhibco oo kaliya.
Loolanka Horyaalka Kubadda Cagta Soomaaliya oo u dhaxeeyay kooxaha Banaadir iyo Elman ayaa haatan waxaa u muuqdaa in natiijada Horyaalka sida dad badan filayan uu u wareegay dhinaca Kooxda Banaadir Telecom kadib markii Kooxda Elman barbardhac la gashay kooxda SITT, halka Banaadir shalay guul aad uga farxeen taageereyaasheeda ka gaartay Kooxda Feynuus.
In kastoo Kooxda Banaadir ay leedahay hadda 24 Dhibcood, haddana waxaa u harsan hal kulan kaas oo la cayaari doonta Kooxda Badbaado oo sanadkan ku laabanaysa xeerka Labaad (C-B-da), halka Elman oo leh 21-dhibco maanta la cayaareyso kulankeeda ugu dambeeyay kooxda Dekeadaha.
Kabtan Kooxda Banaadir Telecom Mustaf France ayaa waxaa uu doonayaa in isagoo Kabtan ah Kooxdiisa Banaadir u qaado Horyaalka Kubadda Cagta soomaaliya in kastoo kol hore sidaan oo kale kooxdiisa u qaaday Horyaalka haddana xilligaas ma ahayn Frnace Kabtan Naadiga Banaadir.
Naadiga Banaadir Telecom waxay doonaysaa in ay noqoto Horyaalka Soomaaliya iyadoo xilli cayaareedkan kooxda Banaadir muujisay sida adag oo ay u soo diyaar garowday, iyadoo ka dhisan dhinaca Difaaca, dhexda iyo weerarka.
Haddii kulanka Galabka dhex maraya Dekedaha iyo Elman barbardhac ku dhamaado sidaas waxaa horyaalka ku guuleystay kooxda Banaadir Telecom, laakiin haddii ay Elman badisa Kooxda Banadir waxay doonaysaa inay ka adkaato ama barbar dhac la gasho kooxda Badbaado.